Dareewallo ku tallaabsadey falal faqooq ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dareewallo ku tallaabsadey falal faqooq ah
La daabacay måndag 25 mars 2013 kl 16.45
Sawirle: Bertil Ericson Enevåg/Scanpix
Shirkad labaad ee ka mid ah shirkadaha basaska ee rakaabka kala waarida ayaa lagu dhaleeceeyey iney ku talaabsatay falal faqooqnaan iyo kala saaridda qowmiyadda iswiidhishka asal ahaan ka soo jeedda iyo ajaaniibta. Dhacdo bishii diseembar ee sannadkii tagay ka dhacday magaalada Örebro eyna ka dambeeyeen basas ay leedahay shirkadda basaska ee lagu magacaabo ”Björcks
Sida uu sheegay Hassan Alizadeh, kana mid ahaa rakaabka in loo qeeybiyey rakaabka koox iswiidhishka asalka ah iyo kuwa sitey magacyada ajaaniibta ee aannu dalkani la bixin. Dadyoowgii iswiidhishka asalka ahaa ayaa raacey baskii hore halka dadyoowgii sitey magacyada ajaaniibtana ey sugeen bas gadaal ka yimid.
Shirkadda ayaa iska dheereeysay eedeeymaha loo soo jeediyey, hase yeeshee sheegtay mar ay wareeysi siisay laanta wararka ee idaacadda SVT inuu 22-kii bishii diseembar rakaabka loo kala qeeybiyey awooddooda. Shirkadda ayaa sameeysa liis rakaabka oo ku saleeysan magaalooyinka ey ka soo jeedaan, magacyadooda, lambarka tigidhada iyo tirada inta ruux ee isla socota. Agaasimaha shirkadda Tomas Björk ayaa sheegay in dareewalladu kala doortaan iyaga oo qiimeeynaya tirada inta ruux ee isla socota, si haddaba boosasku ugu fillaadaan illaa laga soo gaaro goobta loo socdo.